Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa sứ trong chậu nở đúng dịp tết | Excitinghochiminhcity - Excitinghochiminhcity.Vn
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa sứ trong chậu nở đúng dịp tết | Excitinghochiminhcity
Zvidyarwa zvePorcelain zvinokura muhari zvakapusa, nekuda kwemaitiro avo ari nyore-kukura, vanhu vazhinji vanosarudza kukura muhari. Asi maitiro ekuita chimiro chakakosha chemuti uye maitiro ekuchengetedza muti kuti utumbuke panguva yeTet chinhu chisingagone kuitwa nemunhu. Nyaya inotevera ichakubatsira kugadzirisa zvimwe zvinetso zviri pamusoro apa.
Porcelain flower poto
1 1. Nhanganyaya yeporcelain flower plant
2 2. Porcelain maruva mapoto
3 3. Nyika yekudyara porcelain maruva
4 4. Nzira yekurima zvirimwa zve porcelain muhari
5 5. Kuumba hari yemaruva eporcelain
6 6. Kudzora maruva ehari dze porcelain
7 7. Fertilizing porcelain miti
8 8. Diridza hari yemaruva eporcelain
9 9. Kudzivirirwa kwezvipembenene uye zvirwere zvemaruva eporcelain
1. Nhanganyaya yeporcelain flower plant
– Porcelain chirimwa chiri nyore kukura, chinokwanisa kupararira nekukasira, chinopa maruva akanaka, pamuti mumwe chete unogona kubatanidza marudzi mazhinji eporcelain ane mavara akasiyana. Pamusoro pekunaka kwemaruva, zvidyarwa zveporcelain zvinogona zvakare kukotama kuti zvigadzire zvirimwa zvekushongedza uye zvinotsiva nekuda kwemidzi yazvo yakanaka kwazvo. Naizvozvo, maruva eporcelain anofarirwa nevanhu vazhinji uye varimi vemaruva nekuti anounza hupfumi hwepamusoro.
2. Porcelain maruva mapoto
– Vanhu vanowanzosarudza kudyara porcelain muhari dzekushongedza nekuti zviri nyore kutarisira, zviri nyore kugadzira zvirimwa uye zvakanyanya kunaka pane kudyara mubindu.
– Kudyara muhari, zvichava nyore kwauri kutamisa midzi kuhari itsva pane yaunodyara mubindu. Kana iwe ukadyara mubindu, zvakanyanya kuoma kufamba kana iwe uchida kuifambisa kuhari. Kudyara kwenguva yakareba, midzi yemaruva eporcelain inoputika, saka unoda kuchinja pombi kune imwe huru kuitira kuti midzi ive nenzvimbo yekukura. Yeuka kana uchienda kuhari itsva, unofanira kusimudza midzi kumusoro pamusoro pemuromo wehari kuitira kuti iyo itsva porcelain flower pot ive nechimiro chakanaka.
Nehari, iwe unofanirwa kuve nechokwadi kuti gomba remvura rinogara richifefeterwa, saizi yepoto inofanirwa kuve yakakodzera midzi. Iwe unofanirwa kuverenga yakawanda nzvimbo kuti midzi ikure. Parizvino pamusika pane mapoto akawanda ekuti iwe usarudze kubva, unogona kusarudza kubva kuhari dzevhu, porcelain pots kana mitsva yegreenbo pots inogona kuchengetedza nzvimbo uye kushongedza balcony yako.
3. Nyika yekudyara porcelain maruva
– Sezvambotaurwa pamusoro apa, porcelain flower pots zviri nyore kukura, saka maererano nevhu, unogona kusarudza chero rudzi rwevhu chero bedzi ivhu riri porous uye rakanyoroveswa kuti ridzivirire mvura yemiti.
– Inogona kusanganisa musanganiswa wevhu sezvinotevera: 40 – 50% ivhu realluvial, jecha rakavhenganiswa kana nyama yakareruka, 50 – 60% organic zvinhu zvakaita se coir yakaora, deko renzungu rakaora, goko remupunga wakaora. Kana ivhu riine acidic, lime uye phosphate fertilizer zvinogona kuwedzerwa. Zvese zvakakanyiwa zvakanaka uye zvakarapwa nemamwe mafungicides ekuuraya utachiona, akaiswa mumirwi kuti ashandiswe zvishoma nezvishoma.
– Iwe unogona zvakare kusarudza kutenga midhiya kune vane mukurumbira magadheni vane chikafu chakakwana chekusanganisa nevhu kuti vakure porcelain maruva, saka iwe uchave wakaderera basa.
4. Nzira yekurima zvirimwa zve porcelain muhari
Pane nzira mbiri dzekukura porcelain: kudyara mbeu uye cuttings. Asi pari zvino, vatambi vakawanda veporcelain vanoshandisa nzira yekucheka.
– Vanodyara porcelain vanofanirwa kuve nemakomba pasi kuti vabvise mvura, vanogona kuisa dombo diki, zvidhinha zvidiki pazasi pepoto, kudzivirira kuita kuti ivhu rehari rivhare gomba, kana kuti midzi yeporcelain ibude kunze kwegomba, kukura. kusvika pakuvhara gomba kwenguva refu.drain hole.
– Shandisa Compomix Dau Trau ornamental maruva ivhu kuti uzadze kusvika 2/3 yepoto, wozoisa porcelain chirimwa mukati, gadzirisa pakati pehari, midzi inopararira mukuenzanisa. Ramba uchiwedzera ivhu kuitira kuti ivhu ringofukidzwa zvishoma nemidzi uye rinenge rakaenzana nechepamusoro pehari. Kana pane seti yemidzi mikuru, inofanira kurara pamusoro pehari, ivhu rinofanira kunge rakaderera kudarika muromo wehari, kuitira kuti pakudiridza, irege kudarika.
5. Kuumba hari yemaruva eporcelain
– Zvirimwa zvakakura kwemakore 1-2 zvine midzi yakakura kwazvo, varimi vanofanira kukotama nekugadzirisa kuti vave vakanaka. Midzi yePorcelain iri nyore kwazvo kugadzirisa, kunyanya zvirimwa zveporcelain zvakakura kubva kumbeu zvakatonyanya kunaka nekuti hapana chiuno pakati pehunde nemidzi senge porcelain cuttings kana cuttings. Miti yePorcelain inokura kubva kumbeu ine madzinde uye magirobhu anonamirana semunhu akamira, anonyepa, kana akapfugama. Gore roga roga mumwaka wakaoma, nekunaya kwemvura shoma, zvinokwanisika kusimudza midzi yose kubva muhari kuti ucheke kune imwe nzvimbo yakanaka. Rangarira kurega machekwa achipora usati wadyara patsva.
Kuumba muti wemaruva weporcelain
Basic Operations paunenge uchiita
Danho 1: Dhonza chirimwa cheporcelain kubva mupoto, bvisa ivhu rakatenderedza machubhu netsvimbo yemushenjere, dzivisa kukwenya machubhu nekutyoka, kutsika midzi. Shandisa hose yekupfapfaidza (kusuka ivhu rakanamatira kumidzi).
Danho rechipiri: Shandisa banga rakapinza kana reza kuchekerera bazi reporcelain kune chimiro chaunoda uye panguva imwechete chekerera midzi midiki yakatenderedza tuber, chikamu chatinozokura gare gare.
-Garai midzi midiki yebran yakatenderedza midzi yepasi, kutibatsira kuti tidzivise chiitiko chekuora kwebran pakudyarazve muhari, nekuda kwekupwanyika.
-Zvose zvakatemwa nemidzi zvakafukidzwa nemishonga yezvipembenene (Vicarben, Aliette …) kana slaked lime, yakapendwa, kuti iome zvidimbu uye kudzivisa chirwere chekuora mushure mekudyarazve muhari.
Danho rechitatu: Turika chirimwa cheporcelain, chiomese munzvimbo ine mumvuri kwemazuva 5-10, kuita kuti kucheka kuome uye kupora. Chenjerera pakurembera munzvimbo inotonhorera, yakaoma, kwete munzvimbo ine zuva rakananga, izvo zvichaita kuti muti weporcelain upiswe uye ukuvadzwe nekutsva uku.
Danho rechina: Uya nehari ye ceramic muhari yakafanotemerwa, zvinhu zvinoenderana nesarudzo yako yevhu rakadiridzwa zvakakwana usati wadyarwa, uye mushure mekudyara, isa porcelain poto munzvimbo ine 50% yezuva (mangwanani zuva pavharanda), kuitira mazuva angangoita 15-20 kusvika taona matireyi eporcelain atanga kumera pakuchekwa. Munguva yekutanga – kubva pakudyara kusvika pakumera – tinongodiridza zvishoma muvhu repamusoro kana richinzwa rakaoma, kuchengetedza unyoro, kwete pamusoro pemvura nokuti zviri nyore kuora nokuti iyo porcelain chirimwa haina mashizha panguva ino, iyo Yakashata mvura inotorwa, kana iine hydrated, iyo porcelain chirimwa chinogona kuora nyore.
Danho rechishanu: Kana iyo porcelain poto yatanga kumera, inguva zvakare yekusiya porcelain chirimwa munzvimbo ine zuva re80-100%: Panguva ino tinogona kudiridza zvakajairika. Kana ivhu rangooma, denga repamusoro. Cherechedza kuti panguva ino, muti weporcelain uri nyore kuva nehonye nokuti kune akawanda maduku. Nzira yakanakisisa ndeyekuunganidza mazai uye kubata honye ichangobva kuonekwa pane kushandisa mushonga, nokuti zviri nyore kupisa mashizha maduku eporcelain.
-Panguva ino, tinoshandisa fetireza yeNPK 20-20-20 inonzwisisika kusvikira mashizha emashizha akura zvakakwana.Kusvika 10 cm kureba, tinoshandura kuNPK fetiraiza 15-30-15 kana 20-30-20 yekudyara.flowering porcelain.
– Ingoisa yakawanda organic fetireza kana porcelain chirimwa chine nhungirwa diki uye ine mashizha akazara. Nokuti kana ikashandiswa kare, midzi miduku inopiswa nyore nyore, inokanganisa kukura kwemuti.
Danho rechitanhatu: Mushure mekucheka, mukuita kwemuti weporcelain unomera buds, kutanga maruva, kutarisira kwekudiridza kwemazuva ose, periodic fertilizing, inogona kugara kwemwedzi inopfuura 6. Kana madota atanga kupera chimiro, mapazi anorebesa achidonha, tinogona kuabata sezvaaive kana kungoatema zvakare kuita chimiro asi kusachinja hari nevhu idzva.
6. Kudzora maruva ehari dze porcelain
– Kana iwe uchida kuti muti weporcelain uve nemaruva akawanda, usarega davi re porcelain rive rakareba, bazi rinofanira kutemwa mushure mekunge maruva emaruva apera, akachekwa kakawanda, nguva imwe neimwe ingocheka urefu hupfupi, zvikamu zvakawanda zvishoma. kubudisa matavi mazhinji, matavi mazhinji, maruva mazhinji; Kuti porcelain itumbuke pazororo reTet, zvinodikanwa kumisa:
Dzora hari yemaruva eporcelain kuti itumbuke munguva yeTet
+ Kana mvura ichinaya nguva dzose gore rose, mamiriro ekunze ari munyoro, saka cheka matavi eporcelain pamwedzi wakazara wemwedzi wechinomwe.
+ Kana mugore kuine chiedza chakawanda chezuva, mvura shoma, uye kusanaya kwemvura kwenguva refu, cheka matavi eporcelain gare gare kutanga kwaNyamavhuvhu.Yakabatanidzwa nekupfapfaidza nguva nenguva kwemafetereza efoliar ane phosphorus uye potassium yakakwira seDau Trau 007, Dau Trau 009 , Buffalo Head 701, Buffalo Head 901.
– Paunoona mashizha eporcelain ashanduka kubva kugirinhi kusvika kune yero uye obva adonha, pamatipi emabuds mira kugadzira mashizha madiki ane mapundu ane mavara, inova nguva iyo muti unenge uchigadzira buds.
7. Fertilizing porcelain miti
– Ese marudzi e organic kana inorganic fetiraiza akakodzera kukura kwe porcelain maruva mapoto. Iwe unogona kutarisa kune maitiro ekuisa fetereza zvinoenderana nedosi pazasi zvichienderana nezera remuti:
– Porcelain zvinomera pasi pemwedzi mitanhatu: Ino ndiyo nguva yekukurudzira nhungirwa, mashizha nemidzi, saka zvakakosha kudzikisa 10-15g yeNPK 20-20-15 + TE kana NPK 16-12-8 + TE ye10- Mazuva 15. litre yemvura yekudiridza yakanyatsonyorova, inenge 15-20 mazuva akasiyana / nguva. Kusanganiswa kushandiswa kwefoliar foliar Dau Trau 005 inopfapfaidzwa nguva nenguva mazuva manomwe kusvika gumi ega ega.
– Porcelain zvinomera kubva pamwedzi mitanhatu kusvika kune 1 gore: Nguva nenguva shandisa 20-30 gr yeNPK 20-20-15 + TE kana NPK 16-12-8 + TE / poto, 20-30 mazuva akasiyana / nguva. Kushandiswa kwefetereza yefoliar Dau Trau 005 yakapfapfaidzwa nguva nenguva pamazuva manomwe kusvika gumi ega ega, ichikurudzira nhungirwa, mashizha nemidzi. Unogona kushandisa Buffalo Head 007 pfapfaidza paunenge uchida kugadzira maruva eporcelain.
Porcelain inomera inopfuura gore, ine maruva akagadzikana: Nguva nenguva shandisa 20-30 gr yeNPK 20-20-15 + TE kana NPK 16-12-8 + TE / poto, 20-30 mazuva akasiyana / nguva. Kusanganisa kushandiswa kwefoliar foliar Dau Trau 005, inopfapfaidzwa nguva nenguva mazuva manomwe kusvika gumi ega ega, inokurudzira nhungirwa, mashizha nemidzi. Buffalo Head 007 inomutsa maruva uye Buffalo Head 009 ine maruva anogara kwenguva refu.
READ Kỹ thuật trồng cây thiết mộc lan và cách chăm sóc thiết mộc lan | Excitinghochiminhcity
8. Diridza hari yemaruva eporcelain
Porcelain inodyara zuva, iyo inonyatsokodzera kumamiriro okunze ekumaodzanyemba, asiwo inotya kudonha kwemvura, saka chete kana zuva raoma, ivhu richadiridzwa. Porcelain zvidyarwa zvakangodyarwa, kuputirwa kana kuchekwa nekuda kwekucheka hazvifanirwe kudiridzwa zvakanyanya. Kudiridza porcelain kunofanirwa kushandisa ma nozzles akanaka, sprayers kana sprayer pump system.
9. Kudzivirirwa kwezvipembenene uye zvirwere zvemaruva eporcelain
– Porcelain maruva mapoto ari nyore kurwisa zvipembenene, saka iwe unofanirwa kugara uchitarisa chirimwa kuti uone zvipembenene, kubva pakusarudza yakakodzera mushonga. Mhando huru dzezvipembenene uye zvirwere zvinokuvadza porcelain maruva:
– Makonye eGreen: Ukaona makwapa matema pamatipi emashizha, zvinokonzereswa nemakonye anoruma nekudya mabukira emashizha madiki. Kunyanya mhashu dzakasvibirira, dzakachena padiki, dzinokura dzakasvibirira, gonye iri rinodya nekukurumidza, mumazuva 2-3, mashizha ose apera, uye anogona kunyange kudya pamusoro pemuti. Shandisa imwe yemishonga Trebon, Mipcin, Vibasu, Bassa.
– Cotton hoppers uye porcelain nyuchi: Cotton hoppers idiki, yakati sandara, ine yakawanda fluff kutenderedza, porcelain zvipembenene zvakakura zvakapetwa kaviri zvakakura zvakapetwa katatu, miviri yeoval, zvakare inotakura yakawanda fluff uye yakareba vhudzi remuswe, kazhinji. kuruma kusveta muto pamatipi emashizha uye kuvharira resin inotapira kuti majuru adye, uye zvakare kudonhedza chako chena yakawanda pamisoro yemiti; Kwenguva yakareba, iyo porcelain yose yepamusoro inoora. Aphid nezvimwe zvipembenene pamisoro yemiti zvinokuvadza misoro yemiti, pamuchero wavanokuvadza, zviduku zvinowira pasi, uye michero mikuru inoputira mbeu kuitira kuti irege kukura mushure mekudyara. Kana yaonekwa kuti yapfapfaidzwa kudzivirira kukandira mazai. Kana hopper dzaonekwa, shandisa bhurasho diki kupukuta zvese hopper uye powdery mildew Shandisa mishonga Vicidi-M 50 ND, Visher 25 ND, Vidithoate 40 ND…
– Aphid, dandemutande dzvuku: Dandemutande dzvuku rine muviri mutsvuku, zvakare rine vhudzi rakawanda, rakaoma kuona neziso rakashama, rinosveta muto kubva pamashizha madiki, zvichiita kuti mashizha madiki aite tsvuku-tsvuku obva adonha, asina bhudhi. Pfaya kamwechete pamwedzi kudzivirira. Mishonga yezvipembenene inogona kuva: Trebon, Bi 58, Kelthane, Viphensa 50ND, DC Ttron Plus….
– Powdery mildew: Chirwere chekuora chakapfava ndicho chinowanikwa muThai porcelain, chakaoma kurapa. Pakutanga inogona kunge iri doti dema uye yobva yapararira nekukurumidza, kana ikasaonekwa nenguva, chirimwa chinenge chanyorova kuora. Kunyanya munguva yekunaya, zvinokwanisika kuuraya muti wose mushure memazuva mashomanana chete.
+ Chikonzero: Inogona kukonzerwa nebhakitiriya, kana hunyoro hwakanyanya kana nemaronda ezvipembenene.
+ Dziviriro: Cheka chero nzvimbo dzakaora dzakapfava, kusvika kumagumo uko pakati pemuti paine makwapa matema, zvikasadaro icharamba ichiparadzira muti wose, isa lime kune yakachekwa kuuraya utachiona. Shandisa Batocide 12WP, Viben-C, Newkasuran 16.6 BTN…
– Chirwere cheyellow spot pamashizha: Mashizha eporcelain, mushure mekuwirwa nemvura kana mhepo ine simba, anowanzo buritsa makwapa madiki akawanda pamashizha eyero kana mashava sekutsva, anobva apararira nekukurumidza kushizha rose, gare gare kusvava kana kudonha. Dzimwe nguva kudya muhunde kunoita kuti muti uve wakapfava uye uwore kubva pamatavi zvichidzika nomuhunde, kana ukapararira kusvika pasi, muti unofa. Inogona kukonzerwa nefungus uye inopararira nekukurumidza kune chirimwa chose.
+ Kudzivirirwa: Chirwere ichi chinowanzokura mumwaka wekunaya kwemvura, saka kana mashizha angova yero, anofanira kutemwa nekukasira uye kumwaya mushonga wefungicides seTopsin, Appenearb, Dithane, zineb, copper oxychloride… Porcelain miti yakaoma kwazvo. kurapa.Kugara uchitarisisa kudzivirira panguva yakakodzera.
Kunobva: General Admin – LP
← 1 vạn, 5 vạn, 10 vạn là bao nhiêu nghìn? | Excitinghochiminhcity
Đập Đồng Cam nét đẹp hùng vĩ của Phú Yên | Excitinghochiminhcity →